Beesha Caalamka oo ka Walaacsan Dib u dhaca ku yimid Doorashada Baarlamaanka | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Beesha Caalamka oo ka Walaacsan Dib u dhaca ku yimid Doorashada Baarlamaanka
14 September ayey madasha wadatashiga qaran isku raacday xilliga 2aad ee doorashada qaran kadib markii ay dhowr jeer ooh ore dib u dhacday,waxaana ay Beesha caalamka ka digeysaa in dib u dhac kale uu yimaado.
Warka ayaa lagu sheegay in sidoo kale Beesha Caalamka ay walaac ka muujineyso lacagaha lagu helayo kuraasta labada aqal oo daneeyayaasha ay lacago farabadan oo laaluush ah ku bixinayaan.
Warka ka soo baxay Beesha Caalamka ayaa looga codsaday dhamaan daneeyayaasha doorashada Soomaaliya in ay ka qeyb qaataan sidii ay doorashada waqtigeeda ugu dhici lahayd.
Qaar ka mid ah Dowlad Goboleedyada ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay Beesha Caalamka in ay diyaar u yihiin billaabidda doorashada xubnaha aqalka hoose halka kuwana aysan wali billabain aqalka sare oo ka horreeyay kan hoose.
Xubnaha Beesha Caalamka ee warkan soo saaray oo kala ah Qaramada Midoobey,Midowga Afrika,IGAD,Itoobiya,Swiden,Ingiriiska ,Mareykanka iyo Talyaaniga, waxaa ay ka digeen dib u dhac doorasho iyo waqti dambbe oo luma.